Kooxda Milan ayaa xajisatay hogaanka tartanka Seria A kadib markii Udinese ay 2-1 uga badisay… – Hagaag.com
Kooxda Milan ayaa xajisatay hogaanka tartanka Seria A kadib markii Udinese ay 2-1 uga badisay…
Posted on 1 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Milan ayaa sii xajisatay hogaanka horyaalka Talyaaniga markii ay 2-1 kaga badisay kooxda Udinese wareegii lixaad ee tartanka Seria A ee Talyaaniga.
Milan ayaa ku hormartay gool uu dhaliyay Frank Casey (18), Udinese ayaa la timid goolka barbaraha ee Rodrigo de Paul (48 rigoore), ka hor inta Zlatan Ibrahimovic “Rossoneri” uusan gacan ka saarin 3 dhibcood oo qiimo leh isagoo dhaliyay goolka guusha (83).
Milan ayaa dhibcaheeda ka dhigtay 16 dhibcood oo ay ku hogaamineyso kala horaynta, Udinese ayaa leh 3 dhibcood waxayna ku jirtaa kaalinta 18-aad.
Guushaan, Milan waxay ilaashatay rekoorkeeda guuldaro la’aanta horyaalka xilli ciyaareedkan iyada oo shan kulan ay badisay halna barbaro, halka Udinese guuldaradan ay u noqotay midii shanaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan iyada oo hal kulan oo keliya ay badisay.
Labada kooxood ee ku soo dhow ayaa kala ah Juventus iyo Atlanta oo leh min 12 dhibcood iyagoo ku jira kaalimaha 2aad iyo 3aad, farqiga goolasha awgeed. halka Napoli, Sassoula iyo Inter wada leeyihiin min 11 dhibic.